Hamro Online NewsNepal's Leading News Portal | तपाइको मास्क खै ? मास्क नलगाई हिड्दा कारबाहीमा परिन्छ है - Hamro Online News
तपाइको मास्क खै ? मास्क नलगाई हिड्दा कारबाहीमा परिन्छ है
१४ साउन, रामेछाप– जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले घरबाट बाहिर निस्कदा मास्क लगाउनुलाई अनिवार्य गरेको छ । नेपाल सरकारले लकडाउन हटाए पनि कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले आम नागरिकलाई घर बाहिर निस्कदा मास्क अनिवार्य लगाउन आग्रह गरेको हो ।
कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन आम नागरिकलाई आग्रह गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले संयुक्त रुपमा बुधबार सचेतना ¥याली निकाल्नुका साथै सचेना स्वरुप मास्क नलगाई हिडेका यात्रु तथा पैदल यात्रीहरुलाई मास्क वितरण समेत गरेको छ ।
सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत बुधबार निकालिएको ¥यालीको क्रममा ९ सय वटा मास्त वितरण गरिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रमुख रामेश्वर पाण्डेले जानकारी दिए । मन्थलीस्थित देवकोटा चोकबाट सुरु भएको सचेतना ¥याली मन्थली बजार परिक्रमा गरि पुनः देवकोटा चोकमा आएर समापन गरिएको थियो ।
सचेतना ¥याली कार्यक्रममा संवोधन गर्दै रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्माले कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने अभियान आम नागरिकको भएको बताइन । नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउन लकडाउन खुला गरिएको भन्दै लकडाउन खुला गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड पालना नगर्दा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिन सक्ने भएकाले समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिन नदिने अभियानलाई सहयोग गरिदिन आम नागरिकलाई आग्रह गरिन ।
समुदाय स्तरमा कोरोना फैलियो भने फेरि निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउदै त्यो बेलामा जनजीवन झन कष्टकर बन्ने बताइन । रोगले आफ्नो अर्काको भन्दैन, त्यसैले आफ्नो कारणले अरुलाई संक्रमित गराएको छ कि, आफ्नो परिवारलाई संक्रमित गराएका छौं कि भन्ने कुरामा हामी सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ प्रजिअ शर्माले भनिन् ।
अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको औषधी र खोप नभएको भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा निर्देशित उपायहरु र नेपाल सरकारले पटक–पटक जारी गरेको सूचना अनुसार कोरोना महामारीबाट बच्ने उपाए भनेको एक अर्काबीचको दूरी कायम गर्ने, मास्कको अनिवार्य रुपमा सहि तरिकाले प्रयोग गर्ने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने र सरसफाइमा ध्यान दिनु नै विकल्पको रुपमा रहेको प्रजिअ शर्माले बताइन । यी उपायहरु सबैले अनिवार्य अपनाउनु पर्ने पनि प्रजिअ शर्माले बताइन ।
सरकारले जारी गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञा कसैलाई दुःख दिनको लागि नभई नागरिकलाई बचाउने, समाज र नेपाललाई बचाउने अभियान हो भनेर सबैले बुझन जरुरी छ । अभियानलाई हामी सबैले सहयोग गरौं र जिम्मेवार नागरिको कर्तब्य निर्वाह गरौं शर्माले भनिन् । जिम्मेवार नागरिकको कर्तब्य आपूm पनि बच्ने र अरुलाई पनि बचाउने हो उनले भनिन् ।
नागरिकहरुलाई अनावश्यक घरबाट बाहिर ननिस्कन पनि प्रजिअ शर्माले आग्रह गरिन् । अत्यावश्यक भएमात्रै बाहिर निस्कन अनुरोध गर्दै बाहिर निस्कदा मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न पनि प्रजिअ शर्माले आग्रह गरिन ।
मास्क प्रयोग नगर्ने नागरिकलाई कानून अनुसार कारबाही गर्ने बताउँदै २० रुपैयाँको मास्कको लागि सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न लगाएर प्रशासनलाई लज्जित नगराउन पनि प्रजिअ शर्माले आग्रह गरिन् ।
बुधबार आयोजना गरिएको सचेतना ¥यालीको क्रममा बिहीबारदेखि बजार निस्कदा मास्क नलगाउने जोकोहीलाई कानून अनुसार जरिवाना गरिने पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले जानकारी गराएको छ ।